The akasununguka paIndaneti basa. Kukarukureta reimba mukoko denga
Kukarukureta pamusoro kuzvinhu zvokuvakisa nokuti denga mukoko
mufanidzo Dzose 1: 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kutaridzwa kukura padenga
X2 - upamhi divi pamadziro pedyo padenga!
Upamhi edenga S1
Pakukora edenga S2
Daro pakati edenga S3
Daro kumucheto padenga S4
The rakafara namapuranga lathing O1
Pakukora mapuranga lathing O2
Between mapuranga lathing R
Urefu kuzvinhu papepa L1
Upamhi kuzvinhu jira L2
bindepinde bepa (%) L3
Kukarukureta reimba mukoko
X - Housing upamhi
Y - denga kukwirira
C - overhang kukura
B - denga kukwirira
Y2 - mamwe kukwirira
X2 - zvimwe upamhi
Chirongwa rakagadzirirwa convert kuzvinhu zvokuvakisa: yakawanda sheeting (ondulin, Nulin, dombo kana simbi), underlay zvinhu (Asphalt, denga remba), uwandu battens uye nhungo mapuranga.
Uchigonawo ngaaverenge zvimwe zvinobatsira kukura padenga.
Chirongwa anoshanda modes zviviri: nyore mukoko denga uye denga maviri divi Gables (divi matenga), kutaipa 1 uye kutaipa 2.
chenjedzo! Kana uine denga mumwe divi mukoko, ipapo kushandisa kuverenga rokutanga mhando 1, ipapo kutaipa 2. Uye nechekare kubva akagamuchira mashoko anoti nhamba zvokuvakisa: trusses, battens pamapuranga, underlay uye jira zvokuvakisa.
Zvikasadaro, kukanganisa inogona akaverenga. Pashure pezvose, purogiramu rinobvumira cheka kusvikira muna huru pedenga pasi pedenga divi Gables.
The kukarukureta unogona kuona zvishoma nhamba: kukura kana uwandu kuvakwa zvinhu hafu padenga uye mumabhuraketi - zvizere kukura kana vhoriyamu.
Pakuverenga yokuwedzera denga - zvizere kukura uye kukura, uye akaisa zvikomberedzo nhamba mbiri: kukura uye zvezvinotaurwa mumwe kana vaviri pedzimba.
Yambiro! In dzemaitirwe kaingova denga remba, tichiyeuka kuti chirongwa paanowana padenga nzvimbo.
Somuenzaniso, 2,8 kusvika 7,7 ndikawanza nhevedzano machira pamusara mumwe. In chaiyo kuvaka akaisa 3 pemitsara.
Kuti uwane yakarurama kukarukureta mukuwanda machira ane kuzvinhu kuderedza kukwirira jira anofanira akaverenga kuwana wose nhamba mitsara.
Musakanganwa kuti chaipo kuisa kukosha bindepinde.
Apo pakuverenga vhoriyamu zvinhu chikuru denga edenga, pasi hurumende mhando 2, chirongwa haasi zvinosanganisira kucheka-panze divi pasi pediment. Izvi imhaka mamwe matambudziko ari implementation purogiramu.
Pamwe Ndinenge kusarudza mune ramangwana.
Zvisinei, zvakawandisa zvinhu edenga kashoma kuti kunyangarika kana kuti tigadzirise Masvomhu dzavo.
Kuchavawo oga chirongwa zvakawanda njere kukarukureta kaingova kuzvinhu zvokuvakisa.
Uye musakanganwa kutenga zvokuvakisa zvinofanira nevamwe kumucheto kuti tsvina.